‘सरकारले हाम्रा बालबच्चा पाल्दिन्छ ?’
कृष्ण दोङ, चालक, बा २ ज ८२७, आरुबारी, काठमाडौँ।
ठ्याक्कै २० वर्ष भयो, ट्याक्सी चलाउन थालेको। काठमाडौँ आएर ट्याक्सी सिकेर साहूको ट्याक्सी चलाउने काम गरेको हुँ।
पहिले ट्याक्सीको कमाइ राम्रो थियो। महँगी पनि त्यति थिएन। ट्याक्सीले कमाएको पैसाले साहूलाई बुझाएर परिवार पाल्न काफी थियो। बाटो पनि राम्रो थियो। अहिले त बाटोको कारणले ट्याक्सी बिग्रिएर हैरान हुन्छ।
म कतार पनि गएँ। धेरै पैसा कमाउने रहरले विदेश गएको थिएँ। तर, त्यहाँ पनि खासै राम्रो कमाइ हुन सकेन। पाँच वर्ष काम गरेर नेपाल फर्किएँ। केही समय गाउँमै बसेँ। घर धान्न गाह्रो भएपछि काठमाडौँ आएर ट्याक्सी चलाउने काम फेरि सुरु गरेँ।
अहिले ट्याक्सीमा कमाइ छैन। साहूको ट्याक्सी हो। उता पैसा बुझाएर आफू गुजारा गर्न गाह्रो छ।
सरकारले ट्याक्सी चालकलाई गरिखान दिने हो भने मिटरको भाउ बढाउनुपर्छ। हामीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनुवाइ भएन। दुई दिन मिटरको भाउ बढेको थियो। त्यसपछि फेरि जस्ताको तस्तै भयो। हाम्रो पेशालाई एकदमै हेपेको महसुस हुन्छ ।
संसार कहाँ पुगिसक्यो, मिटरको भाउ उस्तै छ। सबै कुराको मूल्य बढेको छ। ट्राफिकले काट्ने चिटको पनि भाउ बढेको छ। पहिला गल्ती गरेर समातिए सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो, अहिले कम्तीमा पाँच सय तिर्नुपर्छ। यस्तो भएपछि बालबच्चा कसरी पाल्ने ? सरकारले हाम्रा बालबच्चा पाल्दिन्छ ?
‘हाउ मच’ले पनि ट्याक्सी चालकलाई हैरान पारेको छ। मिटरमा हिँडूँ, खान–लाउन नपुग्ने भयो, मिटरमा नहिँडूँ ‘हाउ मच’ले समातेर कमाएको जति उतै तिर्नुपर्ने अवस्था छ। म दुई चोटि हाउ मच कारबाहीमा परिसकेँ। ट्राफिक प्रहरी सिभिल डे«समा आएर कतिमा जाने भनेर सोधेपछि ‘जान्नँ’ भन्न मिलेन। ‘यतिमा जाने’ भन्दा हाउ मचले समात्छ। ट्याक्सी चालाएर दुई छाक खान त धेरै गाह्रो भयो। अरू काम गरूँ भने जानेको छैन, अनुभव छैन।
त्यसमाथि प्यासेन्जर पनि उस्तै भेटिन्छन्। ‘मिटरमा जाऊँ’ भन्छन्। ठेगानामा पुगेपछि ‘त्यति धेरै कसरी उठ्यो ? ठग्ने ? बिग्रेको मिटर राख्ने ?’ भनेर उल्टै झगडा गर्न आउँछन्। मिटरमा उठेजति पैसा नदिएर दिक्क लगाउँछन्।
हाम्रा लागि सरकारले गरेको एउटै राम्रो काम भनेको ड्रेस हो। ड्रेस लगाएर बाटोमा बस्दा ट्याक्सी चालक भनेर सबैले चिन्छन्। ड्रेस कोडले सजिलो बनाएको छ।